Myanmar Defence Weapons: တပ်မတော် (လေ)ရှိ ဂျီ-၄ အပေါ့စားတိုက်လေယာဉ်များ
rough patriot May 22, 2012 at 4:42 AM
ကိုmm ရေ(၁)ခုတော့ထောက်ပြပါရစေ ယူဂိုဆလားဗီးယားက ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုဝင်နိုင်ငံယောင်းမဟုတ်ပါဘူး အရှေ့ ၀ါဆောစစ်အုပ်စုထဲတောင်မ၀င်ခဲ့တဲ့ ဘက်မလိုက်နိုင်ငံပါ မှားတာရှိရင်တောင်းပန်ပါတယ် လေးစားလျက်
မေမြို့မိုး August 8, 2012 at 11:45 PM
ဟုတ်ပါတယ်အစ်ကို..။ အစ်ကိုပြောတာမှန်ပါတယ်..။ ဆိုဗီယက်နိုင်ငံတွေက
Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, နဲ့ Uzbekistan
taughttun May 22, 2012 at 7:38 AM
ပျံသန်းရင်း ပဲခူးရိုးမ မိုးတိမ်တောင်ထဲ တအုပ်လုံး(၆ စင်းဖြစ်မယ်ထင်တယ်) ပျက်ကျတာ ဒီလေယာဉ်တွေလားဗျာ... တကယ်သုံးလို့ ကောင်းတယ် လို့ပြောသံကြားဖူးတယ်... နှမြောစရာကြီးဗျာ....
ko phone May 22, 2012 at 8:32 AM
KO Taunghttun..I think the planes you talking about are T-33 shooting star (US made). I think MAF received about 22 of them, they can be armed to teeth but the main problem was short runways in Myanmar. Plane had to carry external fuel tank to stay over the target.
MM May 22, 2012 at 9:11 AM
ဟုတ်ကဲ့ဗျာ ကျွှန်တော်အမှတ်မှားလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်... ကျေးဇူးပါဘဲဗျာ... ပြန်ပြုင်လိုက်ပါ့မယ်
sanaythar May 22, 2012 at 9:28 PM
ကို တောက်ထွန်း၊ ရိုးမမှာ အုပ်ဖွဲ့လိုက် တောင်ခပန်းနဲ့တိုက်မိပျက်ကျတာဒီလေယာဉ်မဟုတ်ပါဘူး၊ T-33 (T-Bird)ပါ။ တောင်ခပန်းမှာ စွပ်ကြောင်းကြီးငါးခုနဲ့ စွပ်ကြောင်းကြီးတွေရဲ့ထိပ်မှာ မီးခိုးတန်းကြီးငါးခုကို နောက်တစ်နေ့မှ ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကတွေ့ရပါတယ်။ မိုးသက်မုန်တိုင်းကြားမှာ မြေပြင်နဲ့တစ်ကွ တစ်စီးနဲ့တစ်စီးတောင် မြင်တွေ့နိုင်ဖို့ခက်ခဲလှတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါတောင်မှ တွေ့ရတဲ့ စွပ်ကြောင်းများဟာ အကွာအဝေးညီညာလှတာကို တွေ့ရတယ်တဲ့။ လေသူရဲများရဲ့ ပျံသန်းမှုစွမ်းရည်နဲ့ သေအတူရှင်မကွာ အုပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆာင်နောက်မှာ တစ်သားတည်းလိုက်ပါ ပျံသန်းခဲ့ကြတယ်ဆိုတာ ဂုဏ်ယူစရာကောင်းလှပါတယ်။ တွက်ချက်မှု အနည်းငယ် ပေမြင့်တက်ခဲ့ရင်တောင်လွတ်မြောက်နိုင်မှာပါ၊ ကျွန်တော်အမှတ်မမှားဘူးဆိုရင် ပန်းတင်တောင်ကြောမှာပါခင်ဗျား။
sawkofan May 22, 2012 at 11:27 PM
အရွယ်အစားနဲ. ဒီဇိုင်းတွေက k-8 တွေနဲ.ဆင်သလိုပဲနော်
rough patriot May 23, 2012 at 7:49 AM
Super Galap G-4 သိပ်ကောင်းတဲ့ COIN (counter insurgency warfare) အတွက်အလွန်သင့်တော်တဲ့ အပြင် အသံထက်မြန်တိုက်လေယာဉ်ပြောင်းလဲမှု သင်တန်းတွေမှာလည်း လေ့ကျင့်ရေးအသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ကြားဖူးပါတယ်
taughttun May 24, 2012 at 7:48 AM
Zeus May 24, 2012 at 9:23 AM
Yes, Ko Sanaythar. It was in 1974 when these T birds (T-33) were lost and BAF at time lost some of it's most experienced pilots.
If we look at G-4s, they are one of the most reliable COIN aircrafts I ever seen. During former Yugoslavia civil waraserbian G-4 attacking Croatian targets was struck byashoulder fired anti-aircraft missile and managed reach back to home airbase (ref http://wn.com/Golubovci_Airbase). This little beast will have no chance of surviving if it wasn't for it's robust design and Rools Royce Viper engines.
We can say that K-8 isasubstitute for G-4s however they carry lower payloads and has less reliable engines than G-4s. The advantage it has over G-4 is K-8 has digital cockpit where the earlier is analog.
sanaythar May 24, 2012 at 11:45 PM
Thanks for knowledge-full message, ko Zeus.
BoGyiGaDone May 25, 2012 at 9:38 AM
မြန်မာတွေကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့စစ်လက်နက်တွေကို ယခုထက်ပိုမိုဖော်ပြပေးစေလိုပါတယ် ကျနော်ကြားဘူးသလောက်တော့မြန်မာနိင်ငံဟာ ကမ္ဘာမှာဘယ်နိင်ငံမှမမှီတဲ့ စစ်လက်နက်ရှိပါတယ်တဲ့ မှန်ရင်ဖော်ပြပေးစေလိုပါတယ်
Wai Him Soe May 26, 2012 at 12:56 AM
zzm October 4, 2012 at 7:53 PM
What I like best of this aircraft is its agility and the Rolls-Royce Viper engine.
I think the Chinese K8 looks similar and its engine is also good (Garrett TFE731-2A-2A turbofan or Chinese WS-11)